Muxuu Eden Hazard ka yiri in Kooxdiisa Real Madrid laga soo reebay tartanka Champions League xilli Canowga uu baraf ugu duubnaa? – Gool FM
(Manchester) 08 Agoosto 2020. Eden Hazard ayaa habeen aan la iloobi karin xalay ku qaaday garoonka Etihad, kaddib markii kooxdiisa Real Madrid looga soo reebay tartanka Champions League.
Waxaa loo soo xushay in si layaab leh loogu soo bilaabo safka hore ee kulankii ay xalay ka horjeedeen Kooxda Manchester City, laakiin waxa kaliya oo uu qabtay waxay ahayd inuu dhaawac soo gaaray xiddigan.
Yeelkeede, macallin Zinedine Zidane ayaa doortay inuu xiddigan reer Belgium garoonka ka saaro maadaama uu xanuun dareemayey, waxaana uu garoonka soo geliyey oo uu ku bedelay dhammaadkii ciyaarta Luka Jovic.
Hazard ayaa markii uu soo dhammaaday kulankii xalay waxaa la arkayey isagoo ku guda jira shirkiisa jaraa’id isla markaana uu baraf kaga duuban yahay canqowga.
“Qeybtii hore ee ciyaarta waxaan ahay kuwo fiican, waxaan u qalannay wax badan” ayuu yiri xiddiga reer Belgium ee Hazard.
“Waa ay dhaliyeen, annaga sidoo kale waan dhalinnay, laakiin marka aad u ciyaareyso kooxda, waxaad doonaysaa inaad wax waliba ku guuleysato gaar ahaan Champions League.
“Laakiin sida ay noo cadaadiyeen waa ay adkeyd, taasina waa sababta aan qaladaad u sameynay.” ayuu Hazard hadalkiisa ku soo gabagabeeyey.